Manatsara bika aorian’ny fety
Hanampy anao hanintsana ireo lanja azo nandritra ny fety ireto fampihetseham-batana tsotra ireto. Ny tombony dia mampiasa ny faritra rehetra amin’ny vatana izy ireto.
Manamafy ny fe
Mitsangana ka atao mitovy tantana amin’ny soroka ny tongotra roa. Atosika mihemotra mankany aoriana ny fitombenana sady aforitra ny lohalika, toy ny handeha hipetraka. Atao mitovy tantana amin’ny gorodona ny fe vao mijanona. Raha efa izay dia arenina moramora ny vatana sady manosika mafy ny vatana amin’ny alalan’ny vody tongotra. Rehefa mampiakatra ny vatana no mamoaka rivotra amin’ny vava. Terena hikainkona ny fitombenana rehefa tafiarina. Izay fihetsika izay no averina in-15 dia miato 3 minitra vao mamerina indray. Manao andiany 3.
Manamafy ny tratra
Mipetraka eto dia mitazona tavoahangin-drano na « haltères » raha manana. Tazonina hahitsy ny lamosina. Tsy azo alempona. Ampidirina tsara ny hoza-kibo. Akarina ny tanana roa dia havonkona hahazo zoro 90° ny kiho ka atao mifanitsy amin’ny soroka izany. Atao mifanakaiky ny kiho roa sady mamoaka rivotra amin’ny vava dia averina amin’ny paozy niaingana no mitroka rivotra amin’ny orona. Izay fihetsika izay no averina in-15. Miato 30 segaondra dia mamerina andiany iray vaovao. Manao andiany 3
Mampitombo ny fitombenana
Mitsilany amin’ny tany indray eto. Aforitra ny lohalika roa. Akarina amin’ny farany avo izay takatra ny fitombenana sady terena hikainkona. Ny tanana kosa ajanona hitehaka amin’ny tany manaraka ny vatana ihany. Tokony hijanona hahitsy ny lamosina mandritra izany. Miato 2 segaondra eo dia miverina amin’ny paozy niaingana. Averina in-50 ity fihetsika ity. Miato kely dia manao andiany iray hafa.
Manafisaka ny kibo
Mitsilany ihany dia akarina eo amin’ny tratra ny lohalika. Atao mitehaka eo amin’ny fitombenana kosa ny vody tongotra. Atao ao ambadiky ny loha ny tanana. Sokafana ny kiho. Tsy atao mitehaka amin’ny tratra ny saoka mba tsy hampijaly ny tenda. Akainkona hiditra ny foitra. Ampiakarina miaraka ny valahana sy ny soroka sady mamoaka rivotra amin’ny vava. Rehefa mamotsotra ny tongotra sy ny soroka ka mamerina azy amin’ny paozy niaingana no mitroka rivotra amin’ny orona. Averina in-15 izay fihetsika izay dia atao mahavita andiany 4.
Mampanify ny valahana
Matory miorirana dia apetraka ambanin’ny loha ny tanana iray. Apetraka manoloana kosa ny tanana faharoa. Akarina avo izay takatra ny tongotra roa mifampitehaka sady mamoaka rivotra amin’ny vava. Rehefa mampidina ny tongotra vao mitroka rivotra amin’ny orona. Averina in-30 izao fihetsika izao dia asiana in-15 kelikely, izany hoe tsy akarina avo loatra ny intsony ny tongotra. Mivadika amin’ny lafiny ilany avy eo.
Atao matetika fotsiny ireo dia hihatsara ny bika sady hihena ny vatana